Ifilimu. Amafilimu, noma amamovie, olunye uhlobo lwezindlela
ⓘ Ifilimu. Amafilimu, noma amamovie, olunye uhlobo lwezindlela zokuxhumana ezisebenzisa okubonwayo ukuxoxa izindaba noma ukufundisa abantu okuthize. Kubantu abani ..
Indaba Yamathoyizi iyifilimu yamahlaya aseMelika ahamba kathathu oshukumisayo kaPstrong kanye noTom Hanks njengomlingisi omkhulu. Ifilimu igxile ezweni lomlingo lapho amathoyizi ahlala khona ngobuchopho bomuntu kanye nama-vocalisations. Ama-Hanks adlala inkomo elwela uthando lomfana nge-astronaut yesikhala. Ifilimu ibinenkathi yokukhiqiza enesiyaluyalu enemali engemihle futhi abaphathi benqaba ithoni yokuthula yefilimu. Kodwa-ke ifilimu laba yimpumelelo enkulu e-United States of America futhi lathola ukubuyekezwa okuhle okuningi nemiklomelo yegolide. Kwakuyifilimu yokuqala yesikhathi esigc ...
Indaba Yesibili Yamathoyizi ulandelana lwango-1999 lwangempela Indaba Yamathoyizi. Kuyisithombe esishukumisayo esivela kuPstrong. Le filimu imayelana nenkabi eyebiwe futhi ahlangane nayo nentokazi enkulisa kanye nomnyuziyamu osentshonalanga. Unyaka okhanyayo wokukhanya usiza ukubasindisa esihogweni saphakade. Ifilimu ekuqaleni belincane kakhulu kepha lafika kuma-cinema amakhulu. Yonke ifilimu icishe yacishwa kwimemori. Kodwa-ke yamukelwe kahle abantu baseMelika futhi abaningi bacabanga ukuthi ifilimu elingcono. Kusizile ukwenza amathoyizi abe yimali ethengisayo yeWalt Disney.
Izimpi Zenkanyezi: Umbuso Uphinde Ushaye futhi ngesiNgisi njenge- Star Wars: The Empire Strikes Back, kuyifilimu lesayensi le-space opera futhi ukulandelwa kwesokuqala, kuboniswe ngo-1980. Kwakuyifilimu yenombolo yesibili lapho kukhululwa, kodwa ifilimu linombolo yesihlanu ngokulandelana kwezikhathi. UMark Hamill usefilimini. Indaba ikhombisa umbusi ongaqondakali noDader Omnyama njengoba belandela izihlubuki ezimbi, futhi uLuka Uhamba-Isibhakabhaka ufunda amabutho nge-Master Yoda. Ezinye izigcawu zenziwa eNorway. Yize abaningi bekubiza kabi ngenkathi ivela okokuqala, isivuthiwe futhi manje ...
UHarry Potter kanye noHhafu weGazi Lenkosi iyinoveli emayelana nokuqagela ebhalwe ngowesifazane waseBrithani uJoanne Rowling, olandelayo wokugcina ochungechungeni lweHarry Potter lwezingane. Le noveli ibheka izisulu zabalingiswa abaningi futhi ifaka impi enkulu nenkosi emnyama. Incwadi yashicilelwa ngonyaka ka-2005 futhi yaphula amarekhodi okuthengisa. Le ncwadi ibigcwele ubumnyama iqhathaniswa neyokugcina futhi yathatha uhambo lwabalingiswa abaphambili. Kwakucatshangwa kahle. Kwenziwa ifilimu ngo-2009.
Izimpi Zezinkanyezi, ezaziwa emazweni angamaNgisi njenge- Star Wars, futhi kamuva ezazibiza ngokuthi Izimpi Zezinkanyezi - Ukuza Okusha, kuyifilimu lesikhala esivela ngo-1977. Yize kuyifilimu yokuqala ukwenziwa ezimpini zeplanethi Yase-Star, yona ifilimu lesine ku-saga. Ababamba indawo kukhona uMark Hamill, uCarrie Fisher, uHarrison Ford no-Alec Guinness. Le filimu ilandela iqembu lamavukelambuso elithatha inkanyezi yokufa njengoba ligijinyiswa nguDark Vader, odlalwa nguPeter Cushing. Kwaba ukushaya kwasusa wonke umbuso wezindaba, futhi kuthiwa kubaluleke kakhulu. Amafilimu amaningi enziwa ...
Indaba Yesithathu Yamathoyizi ifilimu lesithathu kusuka Indaba Yamathoyizi ngonyaka ka-2010. Kuyisithombe sefilimu esishukumisayo sobukhulu bePstrong. Lokhu kukodwa ekunikezeni ngephutha ngamathoyizi amaningi, kufaka ne-cowboy, eyaziwa njengoTom Hanks, nomngani wakhe osendaweni, endlini yezingane edlala. Umnikazi wazo usegugile manje futhi kumele abuyele ngaphambi kokuba anyamalale esikoleni. Kepha ibhere epinki izama ukubashisa. Le filimu yalungiswa iminyaka eminingi kanti abagxeki bathi izwi, imizwa nomculo kuyamangaza. Abanye bathi kuhle ekuqaleni noma kwifilimu yesibili, kodwa abanye a ...
Amafilimu amaningi enzelwa ukuze ezoboniswa kumabhayisikhobhu. Ngemuva kokuba aboniswe kumabhayisikobhu isikhathi esingaba amaviki amubalwa noma izinyanga, kungenzeka amakethelwe kweminye imikhakha. Abe eseboniswa kumabonakude, aphinde adayiswe noma aqashiswe kuma DVD disk noma kuma videocassette tape, ukuze abantu bezowabuka lamafilimu emakhaya. Ungakwazi futhi ukuwadawuniloda noma uzibukele wona Kwi-inthanethi. Amafilimu amadala ayaye adlalwe eziteshini zokusakaza zakumabonakude.
Ikhamera yamafilimu ithatha izithombe ngokukhulu ukushesha. Ngokujwayelekile, ithatha izithombe amafremu ezingama-24 noma 25 ngesekhondi elilodwa. Uma imovie projector, noma ikhompyutha, noma umabonakude udlala lezizithombe ngalesosivinini, kubukeka sengathi izinto ezitshengiswa kulezizithombe ziyanyakaza. Umsindo uqoshwa ngalesosikhathi noma ufakwa ngesinye isikhathi. Umsindo kwifilimu kuyaye kube umsindo wabantu abakhulumayo okubizwa ngengxoxompikiswano, umculo okubizwa nge "soundtrack", imisindo ekhandiwe, imisindo yezinto ezenzeka kuleyofilimu njengokuvaleka kweminyango noma ukudubula kwezibhamu. Amakhamera asemandulo ayesebenzisa okwakubizwa nge photographic film. Yize noma ingasekho i photographic film, umphumela wokugcina usabizwa ngokuthi ifilimu.
2. Enziwa Kanjani?
Umbhali ubhala isikripthi, okuyindaba yefilimu ehambisana nengxoxompikiswano nezinto abalingisi abazozisho baphinde bazenze. U producer uqasha abantu abazosebenza kuleyofilimu aphinde athole yonke imali ezodingeka ukukhokhela abalingisi nezinsizakusebenza. Ngokujwayelekile, ama producer imali ayithola ngokuyiboleka ebhange noma ngokuthola abatshalizimali ukuba batshale ekuqopheni ifilimu. Amanye ama producer asebenzela isitudyo; amanye ama producer a-independent awasebenzeli isitudyo.
Abalingisi nama director bafunda izikripthi ukuthola abazokusho nabazokwenza. Abalingisi bawabamba ngekhanda amagama okumele bawasho kwifilimu baphinde bafunde iminyakazo nezinto isikripthi esibatshela ukuba bakwenze. U director ube esetshela abalingisi indlela okumele balingise ngayo bese umthwebulizithombe athathe izithombe ezinyakazayo ngekhamera yamafilimu.
Uma ukuqopha sekuqediwe, u editor uhlanganisa zonke izithombe ezinyakazayo ndawonye ngendlela exoxa indaba yonke ngesikhathi esithize. Ama- audio engineers nama sound engineers aqopha umculo bese awuhlanganisa nezithombe ezinyakazayo. Uma ifilimu isiqediwe, izindlu zamafilimu zenza amakhophi aleyofilimu abe maningi bese bawafaka kuma film reels. Ama reels lawo abe esethunyelwa kumabhayisikobhu. Umshini osebenza ngogesi obizwa nge projector, ukhanyisa ilambu elixhophayo kuleyofilimu ukuze abantu abahlezi egumbini elimunyama bezoyibuka esikrinini esikhulu.
I genre igama lesingisi elisho uhlobo lwefilimu noma isitayela sefilimu. Amafilimu kungenzeka kube ngaqanjiwe, noma atshengisa impilo yangempela, noma akuhlanganisa kokubili lokhu. Ayizigidi ngezigidi amafilimu enziwa unyaka nonyaka, kepha ayincosana kulawo angalandeli imithetho ebekiwe, noma izindatshana. Amanye amafilimu ayaye axube izinhlobo ezimbili kuya ngaphezulu.
Ama- action movies anezigameko eziningi ezimangalisayo njengokujahana kwezimoto nokudubulana ngezibhamu, okuyaye kwenziwe ngabantu abangompetha. Kuyaye kube khona abenzi bokuhle nabenzi bokubi, ngakho izimpi nobugebengu kuyaye kube izihloko ezivamile kakhulu. Ama- action movies ayaye angawudingi umdlandla omuningi ukuwa buka ngoba izindaba zakhona ziyaye zibe lula. Ngokomuzekelo, kwifilimu ogamalayo lingu Die Hard, izigilamkhuba zahlasela ibhilidi elikhulu, zafuna ukunikwa imali ukuze zingabulali abasebenzi abangenacala. Iqhawe elilodwa lakwazi ukubanqoba lasindisa wonke umuntu. Ama-action movies awavamisile ukwenza ababukeli bakhale, kepha uma leyo- action movie izixuba ne drama, imizwa ingathinteka.
Ama- comedies amafilimu ahlekisayo angabantu behlekisa benza nezinto ezingajwayelekile noma bebhekene nezimo ezihlekisayo noma ezingajwayelekile ezenza ababukeli bahleke.
Ama-dramas ngaqondile, ayaye abe ngabantu bethola uthando noma bedinga ukuthatha isinqumo esikhulu empilweni yabo. Axoxa izindaba ngobudlelwano phakathi kwabantu. Ayaye alandele imigomo yezindaba elula lapho oyedwa noma ababili bama characters umlingisi nomlingisi ulingisa i character anqobe andlule izinqinamba lokhu okubavimbayo ukuze bezothola lokhu abakufisayo.
Ama- Buddy movies anamaqhawe amabili, omunye kumele asindise omunye, bobabili kumele banqobe zonke izinqinamba abahlangabezana nazo. Ama- buddy movies ajwayele ukuba namahlaya, kodwa ikhona nemizwa, ngenxa yobudlelwano phakathi kwalabangani ababili.
Ama-Tragedies kuhlezi kungama drama, futhi ahlezi engabantu abasenkingeni. Ngokomzekelo, indonda nomkayo abafuna ukwehlukanisa, kumele nomunye wabo alethe ubufakazi kwinkantolo yomthetho ukuba ngubani oncono ekunakekeleni umtwana wabo. Imizwa iyinxenye enkulu kulama filimu futhi nababukeli bengaphatheka kabi abanye bagcine sebekhala nezinyembezi.
Ama- Animated movies asebenzisa izithombe ezidwetshiwe njengopopayi ukuxoxa izindaba. Lamafilimu ayedwetshwa ngesandla, ifremu ngefremu, kodwa manje asekhandwa ngamakhompyutha.
Ama-Romantic Comedies ama-Rom-Coms avamise ukuba yizindaba zothando phakathi kwabantu ababili abaphuma ezindaweni ezahlukene, okumele banqobe izinqinamba ukuze bezoba ndawonye. Ama-Rom-Coms avamise ukuba lula, kodwa angaba nayo imizwa.
Ama-Thrillers ngavamise ukuba ngokudida umqondo, izinto ezingaqondakali, noma ngobugebengu obudinga ukuphenywa. Ababukeli bazithola beqagela kuze kube imizuzu yokugcina, lapho kuyaye kube khona ama-twistsokungazelele endabeni.
Ama-Horror movies ngasebenzisa ukwethuka ukuze azojabulisa ababukeli. Umculo, ukukhanya nezindawo zokuqopha izindawo ezenziwe ngabantu ezitudyo zamafilimu lapho ifilimu yenziwa khona zonke zakhiwe ngendlela ezoba nomthelela kulowo muzwa.
4. Uhwebo Lokuqopha Amafilimu
4.1. Uhwebo Lokuqopha Amafilimu Ukwakheka
Ziningi izimboni ezinkulu ezinikezana usizo oludingekayo ukwenza amafilimu, okunjengama-special effects, ukukhanyisa, ukwakha izakhiwo zokuqopha. Iningi lalaba basebenzi bangaphansi kwezinyunyana ezishoyo ukuba amalunga azo kumele abhadalwe umholo ongakanani. Ziyisibalo esikhulu izimboni ezincanyana nazo ezinikezana usizo, njengezindawo zokuqopha umculo eziqopha umculo ziwuqophela ama-sound tracks nama-CGI okuyizithombe ezidwetshwe ngekhompyutha.
4.2. Uhwebo Lokuqopha Amafilimu Ukudayiswa
Ekugcineni, kunezimboni ezidayisa amafilimu ziwathumela umhlaba wonke noma izwe lonke, kuphinde kube khona izimboni zokukhangisa ezazisa abantu ngaleyofilimu ziyiphromothe zizame ukuheha abantu ukuba bezolangazelela ukuyibuka leyofilimu.
4.3. Uhwebo Lokuqopha Amafilimu Ama-Blockbuster
Kumafilimu angama-blockbuster, kuvame ukuba nesiphetho esijabulisayo, lapho zonke izinkinga endabeni zixazululwa futhi wonke umuntu ngaphandle kwesigilamkhuba uphila ngenjabulo engunaphakade. Amanye amafilimu aba yimpumelelo ngendlela yokuba izitudyo ziqhubeke zikhiqize ezinye izigaba noma izahluko zaleyo filimu.
4.4. Uhwebo Lokuqopha Amafilimu Ama-Indie films
Ekugcineni kwama-blockbuster, kunama-independent movies, art movies, noma ama-Indie movies. Lanka avame ukwenziwa yizimboni zamafilimu ezincane, noma yidlanzana nje labantu abangenayo nemali etheni. Umzekelo yifilimu ebizwa ngokuthi-The Blair Witch Project, eyabiza inani elingama $60.000 ukuyenza, kodwa eseyenze imali ebalelwa kuma $200 million ngokuthengisa amathikithi nama-DVD. Amafilimu anjengalena awavamile futhi avame ukudunyiswa underground ngokuxoxelana kwabantu, ukuze abe yintando yabantu noma adume kodwa hhayi njengama-blockbuster.
non - American kutholakala kuyi database uma ukukhululwa US iyatholakala kanti ifilimu elithintekayo uvezwa njengoba lokuphatha ulwazi mayelana ukukhululwa US
kathathu oshukumisayo kaPstrong kanye noTom Hanks njengomlingisi omkhulu. Ifilimu igxile ezweni lomlingo lapho amathoyizi ahlala khona ngobuchopho bomuntu
29 ngoMbasa - Pierre Woodman, kuyinto ifilimu umqondisi ezingcolile baseFulansi 22 ngoLwezi - John F. Kennedy, ngumongameli wezolo weMelika
ukubasindisa esihogweni saphakade. Ifilimu ekuqaleni belincane kakhulu kepha lafika kuma - cinema amakhulu. Yonke ifilimu icishe yacishwa kwimemori. Kodwa - ke
babheke movie kuka 6.000 no zethelevishini abavela CBS, Sony, futhi ezimele ifilimu bakaleyisi ehlukahlukene. Umkhankaso ngo - 1990 ngu - professional computer
ukuphuma ngo - 2019. Lona kuphela ifilimu ye - Disney ezobizwa ngolimi lwesiZulu, njengesiko esikhulwini esiphefumulelwe ifilimu Iningi labadlali abangekho abadlali
Umlandvomphilo ngokwengxenye, ukubuyekezwa, abhalwe futhi Page omdala ifilimu stills, kanye olusha njalo imboni omdala blog okuyinto izici izindaba zakamuva
kuboniswe ngo - 1980. Kwakuyifilimu yenombolo yesibili lapho kukhululwa, kodwa ifilimu linombolo yesihlanu ngokulandelana kwezikhathi. UMark Hamill usefilimini
and the Seven Dwarfs Iqhwa Elimhlophe futhi Abayisikhombisa Abancane ifilimu umcabango womculo efilimu ye - 1937, futhi owokuqala kusuka ku - Walt Disney
Till Kraemer, nomdlali German, TV aphethe ne bangaphambili ezingcolile ifilimu umlingisi. Das größte Porno - Lexikon Coupé magazine, August 29, 2008 Mein
UHarry Potter kanye noMgcini wejele wase-Azkabana
UHarry Potter kanye noMgcini wejele wase-Azkaban incwadi eyindumezulu kaJoanne Rowling waseBrithani, futhi incwadi yesithathu ukufaka uHarry Potter. Kule ndaba, uHarry uhlangana nesiboshwa esiyingozi somlingo omnyama, futhi afunde ukuhamba isikhathi. Incwadi yanyatheliswa ngo-1999 futhi yahlonishwa kakhulu ngabantu nezingane ngokufanayo. Abaningi bathi iyona engcono kunazo zonke izincwadi eziyisikhombisa. Ifilimu yavela ngonyaka we-2004.